मन्दिरका टुँ’डालमा किन कुँ’दिए यौ’न कला ? यस्ता छन् कारणहरु जन्नुहोस ! – Halkhabar kura
१३ भाद्र २०७७, शनिबार १०:०८
मन्दिरका टुँ’डालमा किन कुँ’दिए यौ’न कला ? यस्ता छन् कारणहरु जन्नुहोस !
तपाइँहरु मन्दिर त पक्कै पनि जानुभएको होला । मन्दिर जादा मन्दिरको छाना अ’ड्याउनको निम्ति बनाइएको टुडालहरु नियालेर हेर्नु भएको छ की छैन ? तपाइँ मन्दिरको नजिकै गएर करिव ४५ डिग्रीको कोणमा माथी तिर फर्किएर हेर्नु भयो भने अ’नौठो लाग्न सक्छ। किन भने प्रायः मन्दिरको टुँडालहरुमा बिभिन्न आसनमा यौ’नक्रियाका आकृति देख्न सक्नु हुन्छ । के तपाईलाई लाग्दैन मन्दिरमा यस्ता यौ’नजन्य कालाकृति किन राखिएको होला भनेर ? यसै विषयलाइ लिएर हामीले केही तथ्यहरु सं’कलन गरेका छौ ।
1.किम्बदन्तीका अनुसार मन्दिरमा यौ’नजन्य स’ङ्केत सहितका कला राख्दा चट्याङ पर्दैन र मन्दिरमा कुनै क्ष’ती हुँदैन् ।
२ – कसैले यो बिषयलाई धर्मसँग जोडेर के पनि भनेका छन् भने प्राचिन समयमा बौद्धमार्गीहरुको संख्या बढी थियो । धर्मकै कारण अधिकांश मानिसहरुले बैबाहिक जीवन त्यागेर साधु जीवन बिताउन थाले । यस्तो क्रम बढेपछी त्यतिखेरका हिन्दु राजाहरुले उनीहरुलाई सांसारिक जीवनमा ल्याउनको लागि बिभिन्न उपायहरु रच्न थाले ।
त्यसो त धर्म त्यागेर बौद्धमार्गी ब’न्नेको संख्या बढेको र बैबाहिक जीवन र यौ’न जीवनलाई त्यति ख्याल नगर्नेहरु बढ्न थालेपछि जनसंख्या घ’ट्न थालेपछी त्यतिखेर मन्दिरहरुमा त्यस्ता यौ’नक्रिडाका मुर्तिहरु बनाएर दैनिक मानिसहरुलाई यौ’न क्रि’डामा सक्रिय बनाउनको लागि मन्दिरहरुमा अ’श्लिल मुर्ति बनाउन थालियो ।
यो बिषयलाई विश्लेषण गर्ने हो भने केहि कुरा तथ्य पनि लाग्न सक्छन । किनभने धेरै मुर्तिहरु साधुजस्तो आकृतिमा कुँ’दिएको छ । कतिपय मुर्तिहरु भगवानकै आ’कृतिमा पनि कुँदिएको छ । त्यसको मतलव भगवानले पनि यौ’नक्रिडा गर्छन भन्ने संदेश दिन खोजिएको हुनसक्छ भने अर्को कुरा बुद्ध धर्म मान्नेले पनि यौ’नक्रिडा गर्छन भन्ने संदेश दिन कतिपय बुद्धको जस्तो आकृति देखिने मुर्तिमा यौ’नक्रिडाको मुर्ति कुँदिएको हुनसक्छ । कतिपयले बुद्धको आकृतिमा त्यस्ता मुर्ति कुँ’दिनु त्यतिखेरको धार्मिक वि’रोधी कार्य मानेका छन् ।
३ – अधिकांश प्राचिन मन्दिरहरु बनाउने कार्य तात्कालिन राजाहरुले गरेका थिए । उनीहरुले दिएको जिम्मेवारीमै मन्दिर बन्थ्यो भने मन्दिरहरुमा मुर्ति पनि उनीहरुलेनै छाने बमोजिमको बनाउनुपर्ने हुँदा त्यतिखेर मुर्तिहरुमा राजाहरुले अ’श्लिलता कुँ’देको कतिपयको आ’रोप छ ।
४ – के पनि विश्वास छ भने मन्दिरमा पस्दा मानिसले नराम्रा विचार, भावना बाहिरै फालेर वि’शुद्ध धार्मिक भावना र कार्यका लागि मात्रै पस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन मन्दिरको बाहिर नै कामुक कला कुँ’दिएका थिए ।
५ – कतिपयले के पनि भनेका छन् भने मानिस बढी उपस्थित हुने स्थानहरुमा यसरी मुर्ति कुँ’दिनु त्यतिखेरको शैक्षिक कार्य हो । यसरी आसन आ’सनमा यौ’नक्रिडाको मुर्तिको कारण मानिसहरुले कसरी यौ’नक्रिडा गर्ने भन्नेबारे जानकार हुन्छन् ।
६ – यही बिषयमा के पनि बिचार छ भने संसारका श्रीष्टिकर्ता ब्रम्हा समेतको मोक्षका लागि यौन आवश्यक परेको थियो । उनको पुनरजन्मको लागि यौ’नको भूमिका थियो त्यसैकारण यौ’नलाई मुर्तिको रुपमा चित्रण गर्न थालियो ।
७ – यो बिषयले मुश्लिम आ’क्रमणलाई पनि जोडेर हेर्नेहरु छन् । प्राचिन कालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई मुश्लिम शासकहरुको ड’र थियो । मुस्लिमहरुले आ’क्रमण गर्नेक्रममा नग्न र कामुक बस्तुहरुको नजिक पर्दैनन् भन्ने त्यतिखेरको चेतना थियो त्यसैकारण उनीहरुबाट मन्दिरलाई जोगाउनकै लागि पनि यस्ता आकृति कुँ’दिएका थिए ।
८ – कतिपयले यस बिषयलाई त्यतिखेरको राजाहरुको सम्पन्नता र मज्जाको जीवनशैलीका रुपमा पनि चि’त्रण गरेका छन् ।
९ – अर्को बिषय के पनि छ भने कुमारीलाई जिउँदो देवीको रुपमा पुजा गर्ने चलन छ । कुमारी भन्ने बित्तिकै ‘भ’र्जिन’ हुनुपर्ने मान्यता छ । मन्दिरमा स्थापना गरिने ‘कुमारी’लाई कसैको आँखा नलागोस् र यौ’नक्रिडाको सि’कार बन्न नपरोस् भन्ने मान्यता थियो । यसरी मन्दिरको बाहिरनै मुर्ति कुँ’दिएपछी कुमारीसँग सबैले लाज मान्ने र यौ’नको बिचार नजाग्ने हुँदा मन्दिरको बाहिर त्यस्ता नग्न मुर्ति कुँदिएको थियो ।झिल्को डटकमबाट
Previous दोलखा भिमशेनको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस भाद्र १३ गते शनिबारको राशिफल।
Next छोराको विवाह गर्न पुगेका बुवा सम्धीनी लिएर फरार भएपछि
३० कार्तिक २०७८, मंगलवार १४:५०
विवाह गर्दा साइली औंलामै औठी किन लगाइन्छ ?
३० कार्तिक २०७८, मंगलवार १४:४१
मृ,त्यु हुँदा शरीरबाट कसरी निस्किन्छ आ’त्मा ?
३० कार्तिक २०७८, मंगलवार १४:३८